Inqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa emhlabeni igqibezela ulingo lwaselwandle
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukubambisa » Inqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa emhlabeni igqibezela ulingo lwaselwandle
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukubambisa • Iindaba zeLuxury • iindaba • Iindaba zaseNorway zokuPhula • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Hurtigruten ye-MS Roald Amundsen isondele ekugqityweni eKleven Yard. Kule mpelaveki inqanawe yokuqala yenqanawa yokuhamba ngenqanawa egqibezele ulingo lwayo lokuqala kulwandle kumachweba ecaleni konxweme olusentshona eNorway.
Ngee-fjords zaseNorway njengomhlaba wokuvavanya-kunye ne-Sunnm alre alps edumileyo njengendawo ekhwankqisayo - ubuchwepheshe be-MS Roald Amundsen obuphambili, itekhnoloji eluhlaza yavavanywa emanzini asuka eKleven Yard e-Ulsteinvik, eNorway, ngempelaveki.
“Ndonwabile kakhulu ziziphumo zolingo lwaselwandle. Abasebenzi baseKleven, kunye neekhontraktha zethu, benze umsebenzi omkhulu okhokelela kwityala lolwandle eliyimpumelelo, ”utshilo u-CEO u-Kleven u-Olav Nakken emva kokubuyela kuka-MS Roald Amundsen eyadini ngoMvulo kusasa.
Isiko elakhelwe awona manzi agqithisileyo kwiplanethi, u-MS Roald Amundsen kungokunje wenza iimpahla zokugqibela ecaleni kwenqanawa kadade wabo uMMS Fridtjof Nansen eKleven Yard eUlsteinvik, eNorway.
Iinqanawa zokuhamba ngenqanawa ezihamba phambili ze-hybride, ezihlala iindwendwe ezingama-530, zibonisa ubuchwepheshe obuqhekezayo bomhlaba obufana neepakethi zebhetri kunye nomzimba owenzelwe ngokukodwa umkhenkce. Zombini iinqanawa ziyilelwe kwaye zakhiwa ngozinzo ezingumbindi wazo zonke iinkcukacha.
"Ngeendlela ezintsha ezinokuzinza kwaye le nqanawa inezobuchwephetsha, kubalulekile kuthi ukuba siqinisekise ukuba zonke iinkqubo zisebenza njengoko bekucwangcisiwe," utshilo umlawuli weprojekthi u-Asbjørn Vattley e-Kleven- esongeza ukuba iyadi ikwindawo exakekileyo njengakwibhodi ingaphakathi sele liza kugqitywa.
Emva kokuhambisa le ntwasahlobo, ixesha lobuntombi lika-MS Roald Amundsen libandakanya ukuhamba ngenqanawa kunxweme lwaseNorway, ukuya eSvalbard naseGreenland, ngaphambi kokudlula kwiPaseji yeNorthwest edumileyo kwaye usinge emazantsi eAntarctica.
Wonxweme gqityiwe I Cruise Inqanawe yokudada Iinqanawa zokuhamba ngenqanawa Iinqwelo okwangoku kweenkonzo yenzelwe abasebenzi uhambo ngokugqithisileyo Edumileyo uphawu luhlaza Grinlend mhlabeni ukuxhamla ICE Ezintsha ingaphakathi umsebenzi intombi Ms Emantla ntshona Norowe Norwegian ukhwelile period iplanethi kuhlelwe inikwe amandla iprojekthi iziphumo buya uthi Ulwandle Lonyaka Nqanawa nqanawa emangalisa Entwasahlobo yimpumelelo nokuzinza ezizinzileyo LobuGcisa iteknoloji uvavanyo uvavanyo trial Amanzi ngeveki sentshona Sebenza